သဒ္ဓါလှိုင်း: ကျွန်မဖွင့်လိုက်မိသော စိတ်တစ်စုံ
လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ဆိုသည့်စကားလုံးသည် လောကအတွင်း ရှင်သန်နေထိုင်ကြသော သက်ရှိ လူသားများ၏ ဖြစ်တည်မှု တစ်ခုပင်..။ လူ့ဘဝ နေ့စဉ်ကျင်လည် နေရသည့် အခိုက် ဘေးနားဝန်းကျင်တွင် ရှိနေသော သူများနှင့် ဆက်ဆံပြောဆို နေကြစဉ်အတွင်း မိမိစိတ်နှင့် သဟဇာတ ဖြစ်မည့်သူများ၊ မိမိနှင့် ယုံကြည်ချက် မတူနိုင်မည့် သူများ၊ ကိုယ်ကျိုးရှာသည့်သူများ၊ အခြားသူများနှင့် မျှမျှတတ ဆက်ဆံတတ်သူများ ကို အများအပြား တွေ့နေရပေမည်.။
အချိန်နှင့်အမျှ မိမိဘဝ လူနေမှု အတွက် ကြိုးစားနေကြသူ အများအပြား၏ စိတ်တွင်း ခံစားချက် များမှာလည်း အဘယ်ကဲ့သို့ တူနိုင် ပါမည်လဲ။ တစ်ယောက်ချင်းစီ၏ နောက်ခံ အကြောင်းအရာများ ကွဲပြားခြားနား ကြသလို ရှေ့ဆက် လျှောက်နေရသည့် အခြေအနေသည်လည်း မတူနိုင်ကြပေ။ ထိုသို့ မတူနိုင်သောလမ်းပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်းနေရသည့် အလျောက် စိတ်အခြေခံများသည်လည်း မတူနိုင်ကြ.။ တချို့မှာ ဘဝ၏ စေခိုင်းရာအတိုင်း လိုက်ပါနေရသောကြောင့် စိတ်စေရာ၏ ဆန့်ကျင်ဘက် အခြေအနေတွင် ရှိနေပေလိမ့်မည်။
ငယ်စဉ်ဘဝဖြစ်တည် လာခဲ့ကြရသော ပတ်ဝန်းကျင် မှ တုံ့ပြန်မှုများ၊ အသိုင်းအဝိုင်းများ၏ တန်ပြန် ဆက်ဆံမှုများ ကြောင့် တချို့သူများ စိတ်အခြေ ပြောင်းလဲ သွားကြရပေသည်။ အေးဆက်ဆက် တုံ့ပြန်မှုများကြောင့် ဘဝတလျှောက်လုံး ယုံကြည်မှု အားနည်း သွားကြသူ များလည်း ရှိလေသည်။ မိသားစု အဝန်းအဝိုင်းများ၏ နွေးထွေး ဆက်ဆံမှုသည် များစွာ အရေးကြီးပေသည်။ ထိုသို့ နွေးထွေးစွာနေခဲ့ ကြရသော သူများသည် ဘဝ တလျှောက်လုံးတွင် မိမိကိုယ်တိုင် ယုံကြည်မှု ကို တည်ဆောက်နိုင်ပြီး အောင်မြင်နေ ကြပေသည်။ ထိုသူများသည် မိမိစိတ်ကို မိမိ အောင်နိုင်သူများ ဖြစ်သွားကြလေသည်။
ထိုကဲ့သို့ ငယ်ဘဝကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသော အပြုအမူများ. စိတ်ခံစားချက်များ. သည် လူတိုင်းကို မဆိုလိုသော်လည်း လူအတော် များများတွင် ဖြစ်လေ့ ရှိသည်ကို တွေ့မြင် ရလေသည်။
တချို့သော သူ၏စိတ်သည် အသက်အရွယ် အရပြောင်းလဲ သွားတတ်ကြသည်။ ထိုပြောင်းလဲမှုသည် ငဲ့ညှာတတ်သော အခြေခံ ဇာစ်မြစ်မှ ပေါက်ဖွားလာခဲ့ကြလေသည်။ စာနာ နားလည် ပေးနိုင်သောစိတ် ရှိသူသည် သူ၏ ငယ်ဘဝ တွေ့ကြုံမှုများကို နမူနာယူပြီး တပါးသူအပေါ် မျှတစွာ စဉ်းစားပေးနိုင်သူ ဖြစ်လာသည်။ သူတပါး အခက်အခဲများကို ကိုယ်နှင့်ဖြစ်စေ၊ စိတ်နှင့်ဖြစ်စေ မိမိပြုလုပ်နိုင်ရာ ကို တနည်းနည်းဖြင့် ဖြည့်ဆည်း ပေးနေသူများ ဖြစ်သည်။
တပါးသူ၏ စိတ်ကို ဖျက်ဆီး ပစ်တတ်ကြသူ များလည်း ရှိပါသေးသည်။ ထိုသူ၏ စိတ်အရင်းခံမှာ ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်း ကို ရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စေ၊ မရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စေ တပါးသူ၏စိတ် မှာတော့ ပျက်ဆီး သွားပေသည်။ ထိုသူ၏စိတ်သည် အထီကျန်စွာ ဖြတ်သန်း လာခဲ့သော ဝန်းကျင်၏ ရိုက်ခတ်မှု တစ်ခု ကြောင့် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်..။
မိမိ၏စိတ်လောဘကြောင့် သူတပါး၏စိတ် လမ်းခင်းပေးခဲ့ရခြင်းပင်....။
ငယ်ဘဝတလျှောက် ချမ်းသာစွာနေရပြီး သူတပါး၏ ခက်ခဲ ဆင်းရဲမှုကို ခံစား နားလည်ပေးနိုင်သူ များမှာလည်း လေးစားစရာ ကောင်းလှပေသည်။
လူတိုင်းသည် အသက်ရှင် နေထိုင်စဉ်အတွင်း ကြိုးစား လှုပ်ရှားနေကြရသော်လည်း ဘဝ၏ အခြေအနေအရ ပြည့်စုံ ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ၊ ရုန်းကန် နေကြရသည်ဖြစ်စေ၊ အခက်အခဲ များစွာ ရှိသော်လည်း လူ့လောကရှိ လူ့အန္ဓများ၏ နိုင်လိုမင်းထက် ပြုမူမှုများကို လျစ်လျူ မပြုပဲ ဖိနှိပ်ခံရသူများဘက်မှ ရပ်တည်ပေးသူများ လည်း ရှိလေသည်။ ထိုသူတို့၏ မူလရင်းခံ စိတ်နှလုံးသည် နူးညံ့မှု ပြယုဂ်တစ်ခု ဖြစ်သော မှန်သောဘက်မှ တွေးခေါ် စဉ်းစားပေးတတ်သူများပင်…။
မိဘရင်ငွေ့အောက်မှ သာယာသော လမ်းတွင် လျှောက်လှမ်း လာရသော သူတချို့၏ စိတ်အခြေခံသည် အကောင်းမြင်သော စိတ်ဖြင့် ရှုမြင် တတ်ကြလေသည်။ မိဘနှင့်အတူ မနေခဲ့ရသော တချို့သော သူများမှာမူ အားငယ်တတ်သည့် စိတ်ဖြင့် ကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီး စိတ်အလို မကျမှုများ ဖြစ်ခဲ့ကြလေသည်။ မောင်နှမ အချင်းချင်းကြားတွင်လည်း မိဘဆွေမျိုးများ၏ ခွဲခြား ဆက်ဆံမှုကြောင့် မတူသော သဘောထားများနှင့် ကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီး စိတ်ဒဏ်ရာ ရခဲ့ကြပေသည်။ သူတို့၏ စိတ်ဒဏ်ရာကို သူတပါးအပေါ် ဖုံးလွှမ်း ပုံချရင်း ကုစားကြပြန်သည်။ ထိုသို့ ကုစားမှုသည် သူတပါး၏ဘဝနှင့်စိတ် ကို ဒဏ်ရာပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်ကို မသိဟန်ဆောင်နေတတ်ကြသည်။ သူတို့၏ စိတ်ကို အကောင်းမြင်တတ်သော စိတ်များဖြစ်ပေါ်လာရန် ထိုသို့သော ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ မရှိအောင် ဆက်ဆံပြောဆို သင့်ပေသည်။
နွေးထွေးသော. မေတ္တာတရားများ ပြည့်နှက်နေသော ဝန်းကျင် တစ်ခုတွင် နေထိုင်ခွင့်ရကြရန် အုပ်မိုးပေးသင့် ပါသည်။ သို့မှသာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အကောင်းမြင်တတ်သော မိမိကိုယ်ကိုယ် အားကိုးတတ်သော ယုံကြည်မှု ရှိသော သူများ များပြား လာပေလိမ့်မည်။ ထိုနှင့်အတူ တပြိုက်နက်တည်း မှာပင် မိမိကိုယ်ကိုယ် တာဝန်သိတတ်သော၊ တာဝန်သိမှုနှင့်အတူ တာဝန်ယူနိုင်သော၊ သူတပါး၏ ကိုယ်၊ စိတ်၊ နှလုံး၊ ခံစားမှုကို လေးစား တန်ဖိုးထား၍ ကိုယ်ချင်းစာနိုင်သော၊ လူ့ယဉ်ကျေးမှုကို နားလည်လာသော သူများ ဖြစ်လာနိုင်ပေလိမ့်မည်။
ကျွန်မ ယုံကြည်ခဲ့လေသောစိတ်.. ကျွန်မ လေးစားခဲ့သောစိတ်.. ကျွန်မနှလုံးသားကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့လေသောစိတ်. ကျွန်မအတွက် ခွန်အားတစ်ခု ဖြစ်စေခဲ့သောစိတ်.. ကျွန်မဝိညဉ်အတွင်းသို့ ခိုလှုံခဲ့လေသောစိတ်..
ထို စိတ်တစ်စုံ သည်ကား....
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 12:03 PM
အသက်အရွယ်အရပြောင်းလဲသွားတတ်တာ တကယ်မှန်တယ် ငယ်ငယ်ကတော့ ဘာမဆို ဖွင့်ချလိုက်ရမှ ခုတော့ မဖွင့်ချဖြစ်တာတွေ များလာပြီကွယ်
အမျိုးမျိုး ကွဲပြားတတ်တဲ့ စိတ်တွေအကြောင်း ဖတ်ရင်း လောကမှာ ရုပ်ခန္ဓာထက် စိတ်ဓာတ်က ပိုပြီး အရေးကြီးတဲ့အကြောင်း တွေးနေခဲ့မိတယ်..။
စိတ်ကိုတော့ ဘယ်လိုမှကိုအကဲဖြတ်လို့မရတာအမရေ...တခါတခါ ဘယ်လိုမှ ကိုဖမ်းမမိ